Nanaiky ny fangatahan’ny Rosiana ny Google dia nanasivana lahatsary fanentanana fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2018 16:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, русский, Español, Italiano, polski, English
Alexey Navalny, izay manana ny lahatsarin'ny Orina Mpanasoa Miady amin'ny Kolikoly tao amin'ny YouTube nesorin'ny Google noho ny fitarainan'ny governemanta rosiana, dia migadra 30 andro amin'izao fotoana izao noho ny fanomanana fihetsiketseham-panoherana // Mitya Aleshkovsky, CC3.0
Iray andro mialoha ny fihetsiketsehana lehibe anoherana ny fanavaozana ny retirety tsy ankasitrahan'ny olona nomanina tao Rosia, dia nampahafantarin'ny Google ny mpanomana ny fihetsiketsehana, ny Orina Mpanasoa miady amin'ny kolikoly, fa nesorin-dry zareo ny lahatsary YouTube mampiroborobo ny famoriam-bahoaka, noho ny fanitsakitsahana ny lalànan'i Rosia.
Ny lalam-panjakana ao Rosia no mametraka “andro fahanginana” amin'ny andro iray mialoha ny fifidianana, ary voarara avokoa ny fanentanana ara-politika rehetra. Nifanandrify amin'ny fifidianana Ben'ny Tanàna ao Moskoa (anio) alahady 9 septambra ny famoriam-bahoaka, ary misy ihany koa ny fandrotsaham-bato any amin'ny faritra hafa. Notsipahina ny dokambarotra amin'ny lahatsary maro mampiroborobo ny fihetsiketsehana any amin'ny tanàna rosiana miisa 80 nikasàna hanatanterahana izany, ary nesorin'ny YouTube mihitsy aza moa ireny lahatsary ireny.
Tamin'io herinandro io, nandefa fitarainana ofisialy tany amin'ny Google ny Foiben'ny Vaomieran'ny Fifidianana ao Rosia (CEC) sy ny biraon'ny Tonia Mpampanoa lalàna miampanga ny goavan'ny teknolojia ho midikiditra amin'ny raharaham-pifidianana. Araka ny filazan'ny mpikambana iray ao amin'ny Vaomieran'ny Fifidianana antsoina hoe Alexander Klyukin, izay niteny teo alohan'ny vaomiera vonjimaika hiarovana ny fiandrianam-panjakana sy isorohana amin'ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharaha anatin'i Rosia, nentin'ny manampahefana Rosiana tamin'ny Gogle ny raharaha fampiroboroboana ny Orina Mpanasoa Miady amin'ny Kolikoly [ho] ao anatin'ny teti-panorona politikan'ilay mpanorina azy io izay tsy iza fa i Alexey Navalny. Naorina tao amin'ny Vaomieran'ny Federasionan'i Rosia (lapa ambony amin'ny parlemanta) tamin'ny herintaona ny vaomiera vonjimaika. Mpikatroka mavitrika ao amin'ny fanoherana i Navalny ary mifonja 30 andro amin'izao fotoana izao noho ny fikasana hanomana fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana tamin'ny Janoary 2018.
Leonid Volkov, mpiara-dia amin'i Navalny sady mpitantana ny fanentanana teo aloha raha nirotsaka hofidiana ho Ben'ny tanànan'i Moskoa tamin'ny taona 2013 io mpikatroka io, no nilaza tao amin'ny takelaka Facebook fa efa nametraka fitoriana tao amin'ny Google ny Orina Mpanasoa Miady amin'ny Kolikoly ary mampitandrina amin'ny fanajana tsy misy fanontaniana izay fangatahana fanivanana rehetra avy amin'ireo governemanta mpamoritra:
Nahoana moa izao no zava-dehibe tokoa.
Tsy vao sambany ny manampahefana rosiana no mihoa-pahefana hamoaka fangatahana tsy mifanaraka amin'ny lalàna amin'ny vondron'orinasan-teknolojia. Fa sambany kosa, anefa, ny Google no nanapa-kevitra ny hanaja fangatahana toy izany.
Tsy maintsy atao laharam-pahamehana ambony ny zava-mitranga tahaka izany ary atao izay hiverenany amin'ny laoniny. Fantatsika izao ny fiasan'ny fanajana ara-pitsarana any amin'ny orinasa lehibe: manoro hevitra hatrany ny mpisolovava hanaraka ny lalàna ao an-toerana mba isorohana amin'ny olana amin'ny manampahefana ao an-toerana. Fomba fiasa tsara izany any amin'ny firenena tsara petraka ny fampanajana ny lalàna.
Tokony hiatrika ny zava-misy ny vondron'orinasa — tafiditra amin'izany ny Google —. Any amin'ny fitondrana tsirefesimandidy matetika izy ireny manitsakitsaka ny lalàna. Tsy tokony heverina avy hatrany fa ara-dalàna izay rehetra fangatahan'ny fahefam-panjakana (governemanta). Tsy maintsy ilaina ny tsikera betsaka mba hiarovana ny mpisera sy ny zony.